Kaliya qoraalka soo socda ayaa lagu dhex daray dhinaca xaasidnimada:
Haddii aad nuqul ka sameysato qoraal ka mid ah bogga noocaas ah, xarigga aan loo baahnayn wuxuu had iyo jeer ku dhammaan doonaa qaanadaha (iyadoon loo eegin qoraalka la soo guuriyay ee ku-meel-gaarka ah). Halkii laga siin lahaa "amarka sharka" waxaad hadda la imaan kartaa waxyaabo badan oo fool xun. Waxa oo dhan wuxuu noqonayaa mid dilaa ah haddii xariiq jabiyo dhamaadka xariiqa loo isticmaalo in isla markiiba lagu fuliyo koodhka:
Sidoo kale way fududahay in dib loo dhigo wax soosaarka konsol-ka si markaa isticmaaluhu uusan isla markiiba u dareemin waxa uu soo galay. Tusaale ahaan, markaad koobiyeynayso nambar koodh aan dhib lahayn, waa macquul in la toogto qaybahaaga marka aad dhaafayso.
Haddii aad doorato qoraalka la doonayo, tusaale ahaan Firefox-kii ugu dambeeyay (aayadda. 45.0) kani maahan ee waa qoraalka gadaashiisa ku dhammaanaya boodhka hoose.
Labada habba halkaan toos ayaa looga tijaabin karaa. Halkan waa nooca JS:
Iyo sidoo kale nooc CSS ah: